Arsenal oo ku socota wadaddii ay kula saxiixan lahayd xiddig ka tirsan Barcelona – Gool FM
Dajiye May 19, 2022
(London) 19 Maajo 2022. Wargeyska “Daily Star” ee dalka England ayaa sheegay in Arsenal ay si dhab ah uga fikireyso saxiixa daafaca Barcelona ee Samuel Umtiti inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee xagaagan.
Daafaca reer France ayaa u dhaqaaqay Barcelona xagaagii 2016 markaas oo uu kaga soo biiray Lyon, waxaana lagu qiyaasay 25 million euros.
Laakiin Samuel Umtiti oo 28 jir ah, ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo soo noqnoqday oo u diiday inuu si joogto ah uga qayb qaato kulammada kooxda Barcelona, ​​kaddibna waxa uu noqday mid kursiga keydka ku jira xilli ciyaareedkan isagoo ka qayb galay kaliya hal kulan.
Wargayska ayaa tilmaamay in maamulka Barcelona ay doonayaan in wado kasta ay ku iibiyaan Samuel Umtiti xagaagan, waxayna u muuqataa in Arsenal ay noqon karto dookha koowaad.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta uu mabda’a ahaan ogolaaday inuu heshiis la galo Samuel Umtiti, kahor inta aysan maamulka Gunners u dhawaaqin saxiixa daafaca reer France.
Dhinaca kale, Barcelona ayaa ogolaatay in ay hoos u dhigto codsigeeda dhaqaale si ay u iibiso Samuel Umtiti taasoo wadada u furaysa Arsenal inay si fudud ula wareegto xiddiga.
Waxaa xusid mudan in Samuel Umtiti qandaraaskiisa Barcelona uu dhacayo xagaaga 2026.